ညဇာက ၁၆.၂.၁၀ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က လုပ်တေ သံအမတ်ရောက်လို့ဆိုလာ ဇာဆိုလာလေ့ မသိ ကျွန်တော့်ကို ခေါ်ထားလို့ လားတီးရပါရေ။ စစ်တွေဟိုတယ်မှာပါ။ ကျွန်တော့်မှာ ကျွန်တော့်ညီချေ အောင်ကျော်မင်းချေနဲ့ ကီးဘုတ် ၁၆သိန်းတန်ချေကို ထမ်းလို့ (stand တိပါ အပါအ၀င်) ကျွန်တော့်ရို့ကို တကူးတက ကြိုလာရေ ကားဖွတ်ချပ်ချေနဲ့ လားပြီးကေ ဖျော်ဖြေလားကတ်ပါရေယေ။ ယင်းမှာရောက်မှာ ထမင်းကျော်တပွဲနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုက ကျွန်တော့် ဆရာ၊ အပေါင်းအသင်းတိနဲ့ ခွက်ပုံးချေနှက်ပြီးကေ ဖျော်ဖြေချင်အားကြီးလို့ စောင့်နီကတ်ပါရေ။ ယင်းမှာ လူကြီးမင်းတိရောက်လို့ကြည့်လိုက်မှာ လူက ၁၅နဲ့ ၂၀လောက်ပါပါရေ။ ကျွန်တော် ကျွန်တော်ရို့ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့ကို ပြန်ကြည့်လိုက်ပါရေ။ ဟဟ ကျွန်တော်ရို့မှာ အင်တန်ချေ အင်အားတောင့်ရေ။ ယဉ်ကျေးမှုက အကသမချေတိနဲ့ တီးလူနဲ့ဆိုရေလူနဲ့ဆို ၅၀နဲ့ ၆၀လောက်မှာ ရှိရေ။
ယကေ ပွဲစကတ်ပါဗျာလ်။ အစီအစဉ်အတိုင်းတက်ကတ်၊ ကကတ်ပါဗျာလ်ချင့်။ တနားချေလောက်လေ့ ဖြေဖျော်ရေ (ပုဒ်ရေ ၇ပုဒ်)လောက်လေ့ကျရေ။ ပြန်ကတ်ပါဖို့ဗျာလ်လတ်။ အချိန်ကိုတန့်။ ချက်ချင်းပွဲသိမ်း။ မိုက်တေ ဟဟ (သက်သာရေနင်းရာ) ဆုတော်ဖေ့သာလေ့ တသိန်းကြီးများတောင် ချခပါရေ။ ကျွန်တော်ရို့လေ့ လားဖို့ ကိုယ့်ကီးဘုတ်ချေတိကို သိမ်းကတ်ပါယာမနားယေ။
တနားမှာ ပွဲစီစဉ်ရေ အမတယောက် ပါလာရေလူတိကို (အကသမချေတိ မပါပါ) ဖေ့သာနှစ်ထောင် နှစ်ထောင်စီလည်ပီးပါရေ။ ဆုငွေပေါ့ (ဟ ဟဟ )။ ကျွန်တော့်ဘားကိုရောက်လာခါ မယူပါယာမမ ကရေမမချေတိကိုရာ ပီးလိုက်ပါဖိ။ နှစ်ထောင်နဲ့တော့ သိက္ခာအကျမခံနိုင်။ နှစ်သိန်းဆိုကေ တမျိုး (ဟ ဟဟ ) မရယူရပါဖို့လတ်။ ကျွန်တော်ယူပြီးကေ ကျွန်တော့်ညီချေကို ပီးလိုက်ပါရေ။ ယလောက်နဲ့ပြီးယာထင်ပါလို့လား။
အိမ်ကိုပြန်ဖို့ ကားထက်တက်ကတ်ပါယာမနားယေ။ ဗုံတိလေ့ ပါလို့ ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်မှာတန့်ပါဖို့လတ်။ ပစ္စည်းချပြီးမှ ကျွန်တော်ရို့ကို ပြန်လည်လို့လိုက်ပီးဖို့ပါလတ်။ ယင်းယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်ကိုလေ့ရောက် ကားသမားလုံးဝ မလားပါယာ။ ဇာဖြစ်လို့ပါလေလို့ စုံစမ်းမှာ ဆီမပီးသိမ့်လို့ပါလတ်၊ယလောက် ဥာဉ့် ၁၀နာရီခွဲလောက်မှာ ဇာအဖကလာလို့ဆီပီးဖို့စော်စောင့်လေ့တော့မသိ။ (သူ့ဝမ်းစာကို နားလည်ပါယင့်) ကျွန်တော့်ရို့တော့မစောင့်နိုင်။ ဆိုက်ကယ် taxi ငှားလို့တာဖြစ်လားဖို့ယာဆိုပြီးကေထွက်ပါလတ်ကတ်ပါရေ။ လမ်းမှာ taxiလေ့ ရှာမတွိ့လို့ ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်ကနီ ဘောက်သီးစု အိမ်တရောက်ထိ ကိုယ့်ကီးဘုတ်ချေကို ကိုယ်ထမ်းဗနာ (လီးကလီးရေနန့်) ပြန်ပါလတ်ကတ်ပါရေ။ ကျွန်တော် လမ်းမှာ ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ အကောင်း စဉ်းစားပါလတ်ယင်း အော ..အော (နှစ်ထောင်တန် နှစ်ထောင်တန်)..........။ ။
Next post: ဦးကျော်လှ...
Previous post: မလေးရှားနိုင်ငံမှ...
Tags:	ကျွန်တော်နဲ့ နှစ်ထောင်တန်